Wararka Maanta: Jimco, Jun 25, 2021-James Swan: Waa muhiim in doorashada waqtigeeda lagusoo gabagabeeyo
James Swan ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Anadolu Anadolu, dhameystirka doorashada waqtigii loogu talagalay, in ay mudnaanta u leedahay wax ka qabashada baahiyaha ka jira dalka, sida Xaaladda bani'aadamnimada.
Wuxuu sheegay in ka badan 20% dadweynaha Soomaaliya in ay wajahayaan baahiyo cunto. Wuxuu sheegay ku dhowaad 6 milyan in ay u baahan yihiin gargaarka bani'aadamnimo.
Hadalka James Swan ayaa kusoo aadaya xilli maalinta berri ah lagu wado in Muqdisho uu ka dhaco shirka wadatashiga qaran oo looga arrinsanayo dhameystirka doorashooyinka.
Dowladda federalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa in ay shirkooda ku dagsadaan jadwal cusub oo doorashada ah.